4 Essentials tareen Travel Pre-Trip In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 4 Essentials tareen Travel Pre-Trip In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 21/02/2020)
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu farxada badan oo ku saabsan safarka ee Europe waa in aad halkaas ka heli kartaa tareen meel kasta. Waa celceliska ugu baahsan ee gaadiidka oo jecel dad badan oo ay ku safri qaarada. Dadka ay su'aalo ku weydiiyaan ka hor inta ay go'aansadaan in ay tareenka a, daruuriya pre-safarka sida meesha aan soo iibsan tigidhada? Sidee baan u hubi jadwalka? I Can Iskutallaab ka mid ah dalka in kale? Waa maxay tareenada habeenkii sida?
Halkan waxa ku jira daruuriga pre-safar aad qabto in aad ogaato:
Jadwallada iyo Qiimaha Tareenadu Yurub
Inkasta oo dhan of Europe waxaa lala by shabakad tareenka aad u ballaaran dal kasta uu leeyahay shirkad ay tareenka iyo, Sidaa darteed, ay website la jadwalka iyo heerarka. Haddii aad rabto in aad raacayso tareen dalka isla gudahood, oo aan ka soo gudbaya xuduudda kasta, waxaa weli lagu talinayaa in aad si toos ah u tagaan si ay u badbaadi Tareen A sida aad u samayn lahaa duulimaadyo Skyscanner. Haddii aadan aqoon waxa ay tahay, Google idin siin doonaa jawaabta. Ku dhowaad dhammaan websites waxay leeyihiin version Ingiriisi ah, sidaas darteed waa ay fududahay in la maraan iyo hubi jadwalka. Haddii aad rabto in aad raacayso tareen ka mid ah dalka in midkiinba midka kale (had iyo jeer gudahood Europe) Sidoo kale waa in aad raadiso wadada ee ah app sida Save A tareenka.
Sidee iyo Marka Iibsashada Tigidhada?
Mid ka mid ah daruuriga pre-safarka waa xaqiiqo ah tigidhada. marinnada tareen Qaar ka mid ah (gaar ahaan kuwa ka mid ah Xawaare sare iyo kuwa isku xidha caasimadaha ama magaalooyinka waaweyn) u muuqdaan in ay ku kici qiimaha marka taariikhda departure wajiyada; waxaa jira kuwa kale (tareenada maxaliga ah iyo kuwa that link magaalooyinka u dhow) in had iyo jeer sii qiimo isku mid ah. Haddii aad u safrayso ka magaalada caasimada, waxaa ugu fiican in ay soo iibsato tigidhka dhawr todobaad ka hor si aad u hesho qiimaha ugu wanaagsan ee. Haddii aad ka iibsan tikidhada dhex apps ah (badan shirkadaha tareenka Yurub sidoo kale waxay leeyihiin app u gaar ah), waxaad heli doontaa tigidh elektaroonik ah la code QR aad tusi kartaa darawalka ka shaashadda aad telefoon, sidaa darteed uma baahnid inaad si ay u daabaco.
Waxa ugu fiican oo ku saabsan safar tareen ah waa in saldhigyada yihiin inta badan bartamaha magaalooyinka iyo waa si fudud loo heli by metro, baska ama on foot. Ma aha in aad in ay u safraan saacad inuu garoonka diyaaradaha tagaan (haddii aad tahay oo ku taal duleedka magaalada, inkastoo guud ahaan waa inuusan marna qaadataa muddo dheer). Haddii aad socdaalo boorsooyinka yar, waxaad tagi kartaa by gaadiidka dadweynaha. Haddii aad tahay mid aad u muxaafidka, waxaa laga yaabaa in taxi waa ikhtiyaarka ugu fiican. Waxa aanu dhaawici si odhan: waxaa jira magaalooyinka waxay leeyihiin dhowr saldhig tareen (tusaale ahaan, Paris) sidaas darteed mar walba iska hubi waxa aad tareenka ka tegey,. Mararka qaarkood waxaa dhici kara in aad leedahay si ay u gudbiyaan ka mid saldhigga in kale.
Wakhtiga oo ka mid ah Tareenadu in Europe
tareenada Yurub daqiiqadii saxda tago (haddii uu jiro dib u dhac u ah qaar ka mid ah sabab cimilada). Helitaanka saldhiga ku saabsan 15-20 daqiiqadood ka hor inta had iyo jeer waa mid ka mid ah daruuriga pre-safarka. Maskaxda ku hay in ay jiraan tareenada in aad u dheer yihiin iyo mararka qaarkood waxaad yeelan doontaa in ay socdaan badan si aad u hesho in dhamaadka madal. joogsato u dhexeeya mid ka mid ah magaalada oo kale badanaa ma socon wax ka badan dhowr daqiiqo.
Tani waxa ay ahayd guide yar laakiin waxtar on daruuriga pre-safarka safarka tareenka ee Europe iyo waxyaabaha aad u leeyihiin in ay ogaadaan ka hor inta uusan go'aansan in la qaato mid ka mid ah. Waxaan rajaynaynaa in waayo-aragnimo aad u noqon doonaa mid qiimo leh.
Ku qor Save-A-tareenka inay jartaan tikidhka tareenka si aad u caga kasta oo 3 daqiiqo, at heerka tigidhada tareenka ugu jaban iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/4-train-pre-trip-essentials-europe/- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / de ama / iyo luuqado badan.
#boorsooyinka #packing europeantravel tareen safarka safarka tareenka